Okwamanje, Japanese puzzle ama-crossword ziye kwakuqala ukwanda okungavamile. Kuze kwaba seminyakeni embalwa edlule ngakho, bambalwa abantu bazi nhlobo, kodwa manje, indlela yokuxazulula emaphazili Japanese - ukwazi pheze konke. Kodwa lokhu akusho ukuthi abawona lula ukuxazulula, hhayi ngaso sonke. Kukhona Yiqiniso, nezinketho kube lula, kodwa kwi Ongoti ezingcono kufanele ucabange okuningi. Kodwa ngenxa ungathola ukwaneliseka hhayi kuphela omuhle wokuziphatha okuhle, kodwa futhi isithombe esihle. Phela, umehluko oyinhloko Classic Japanese crossword puzzle itholakala lokuthi ukuthi akudingeki ukuba ukuqagela amagama kanye nemidwebo.
Isixazululo skanvordov futhi zakudala abathandi puzzle abe kancane yokuzijwayeza engqondo uPáll. Inketho puzzle for ingqondo, okuyinto beza kithi kusukela eZweni YeJapan kukunika ithuba ukukhombisa intelligence kancane ngakolunye uhlangothi. Kodwa into eyinhloko - zisiza sandise HORIZONS zabo futhi aqeqeshe ukucabanga okunengqondo futhi ukuthuthukisa umcabango.
Yiliphi izwe kuyinto endaweni okwazalelwa kuyo crossword, kuyacaca isihloko, kodwa ngubani kumdlali - Akucaci ngokuphelele. Abantu ababili lokudala Japan abathi ubunikazi. Umculi Non Ishida uthi wokuqala yasungulwa nonogrammy - imigwalo izikwele omnyama nomhlophe, esibonisa izilwane nabantu. compatriot wakhe - Tetsuya Nishio - lithi, 'kwakuyizwe uJehova waqale necebo umdwebo wezinombolo. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, kodwa ekupheleni amabili ekhulwini iphazili ngokunqoba nomvikeli emhlabeni, bangazihluphi izingqondo amakhulu ezinkulungwane zabantu umbuzo indlela yokuxazulula emaphazili Japanese.
Isinqumo esifanele uzonika isithombe
Umsebenzi oyinhloko ngaleso sinqumo - lokuphinda iphethini ngezinombolo. Basuke efakwe ohlwini phezulu amakholomu, kanye kwesokunxele emigqeni. Lezi zinombolo zibonisa inani amaqembu ukupenda phezu amaseli nendlela amaseli kakhulu kufakwe eqenjini ngalinye. Ukuze ngempumelelo ukuxazulula le puzzle futhi wazi indlela yokuxazulula emaphazili Japanese, kufanele sikhumbule le mithetho:
izinombolo kufanele kubhekwe kusukela phezulu kuya phansi kanye kwesokunxele kuya kwesokudla;
iqembu ngesineke izikwele kumele ahlukaniswe okungenani oyedwa unpainted.
Ukuxazulula kubalulekile ukuthola indawo efanele amaqembu cell. Ukuze lula lo msebenzi, kubalulekile, okokuqala kunakho konke, ukuze uqaphele zonke amaseli okuyiwona Imininingwane isivele iyatholakala.
Labo kakade indlela yokuxazulula emaphazili Japanese omnyama nomhlophe, futhi kalula angabhekana ngayo umbala. Umehluko omkhulu phakathi ezinemibala ikhathuni nokwengqondo kusukela black nomhlophe - wukuthi amaseli angakha phezu endaweni imibala ambalwa. Lokhu kubanika kubalulekile sici ekuxazululeni - khona amaseli non-anemibala akusito phakathi kwamaqembu umbala ezihlukene zamangqamuzana.
Gymnastics ukuze ingqondo
Namuhla kungenzeka ukuthenga omagazini okhethekile nge-Japanese puzzle noma crossword puzzle ukuxazulula ngesicelo ezizindeni ezikhethekile kuyi-Internet. Kufanele kuqashelwe ukuthi puzzle Japanese, ikakhulu labo ababenezinkinga ezingeni lelisetulu eyinkimbinkimbi, kuyasiza kakhulu ukuqeqeshwa ubuchopho. Ngaphezu kwalokho, hhayi kuphela enyamalele ingqondo, kodwa futhi ukuthuthukisa ukucabanga. Ngokufunda ukuxazulula emaphazili Japanese, akusadingeki be bored uhambo olude noma imicimbi.
Ukukhula izingane 1 unyaka. UBANI namazinga: Ithebula
"Pike umsila": ukunakekelwa ekhaya ikuvumela ukuba sifinyelele izimbali!
Greece, Patras: incazelo, ezikhangayo, amahhotela kanye nokubuyekeza